पूजाकोठामा भुलेर पनि पितृहरूको तस्बिर झुण्ड्याउनु हुँदैन ? - aajakoparibesh
पूजाकोठामा भुलेर पनि पितृहरूको तस्बिर झुण्ड्याउनु हुँदैन ?
परिवेश आजको २०७६ आश्विन ७, मंगलवार १७:५२ गते
हिन्दू धर्मले जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्म निर्धारित परम्परा पालन गर्नु पर्छ भने मान्यता राख्दछ । पर्वहरूमा मात्र नभएर दिनदिनैको कर्मकाण्डमा पनि धर्म, परम्परा र भगवानको पूजापाठलाई हिन्दू धर्मले महत्व दिन्छन् ।
दिनदिनै पूजापाठ गर्ने हामीहरुले छुटा- छुट्टै पूजाकोठा बनाउने गर्छौ । तर केही अबुझ मानिसहरूले देवताका साथसाथै आफ्ना पितृहरूको तस्वीर पनि पूजाकोठामा राख्ने गर्छन । तर, वास्तुशास्त्रले पूवाकोठामा पितृहरूको तस्वीर झुण्ड्याउनु हुँदैन भन्छ । यसो गर्नाले परिवारमा कलह पैदा हुन्छ ।
हिन्दू धर्मअनुसार मानिसको मृत्यु भएपछि उसको आत्माले शरीर छोडेर अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छ । अनि आत्माको मात्र पूजा हुन्छ, शरीरको हुँदैन । त्यसैले त प्राण गए पछि शरीरलाई जलाइन्छ । अब भगवान् सँगै राखेर मृत व्यक्तिलाई पूजा गर्नु त भगवानकै निन्दा हो किनकि भगवानको त जन्म र मृत्यु हुँदैन।
वास्तुको अनुसार भगवानको तस्वीर उत्तर वा उत्तरपूर्व दिशामा राख्ने गर्नु पर्छ । पूवाकोठा पनि उत्तरपूर्वमै दिशामा नै हुनुपर्छ । मृत पितृहरुको तस्वीर चाहिँ अर्कै कोठाको दक्षिण पश्चिमतिर राख्नुपर्छ । वास्तुक्रममा तस्वीरहरू नराख्दा घरमा अशान्ति बढ्नका साथै आर्थिक संकटले पिरोल्न थाल्दछ ।
२०७७ भाद्र २, मंगलवार ०८:०८ गते
अब दुई श्रीमती हुने पुरुषले भत्ता पाउने
२०७७ श्रावण ३२, आईतवार २०:१० गते
२०७७ श्रावण ३२, आईतवार १८:४८ गते
फेरि पनि आयो तीज : पुष्पा घिमिरे
२०७७ श्रावण २५, आईतवार १७:१७ गते
कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव बिष्णु पौडेल आईसोलेसनमा
२०७७ श्रावण २४, शनिबार २०:०४ गते
सेक्स गर्दा आनन्द आउनुको रहस्य यस्तो!!!!
२०७७ श्रावण २३, शुक्रबार ०७:५२ गते
छ हजार दुई सयलाई मात्र कोरोना